Asi kana chaizvoizvo Jesu achiuya shure muna 2036 saka ane mubhaibheri kubvutwa kuchaitika 2029th
Anders Gärdeborn dzake bhuku "Mästerdirigentens basa".
Kubvutwa zvebhaibheri inoitika mumakore manomwe asati Jesu anodzoka. Jesu vasingakwanisi kudzoka kusvikira pakubvutwa kwakaitika. Muna 2029, tinoziva ipapo pamusoro Anders Gärdeborn zvakanaka.
People uye nokutenda
Anders Gärdeborn , izvo, sezvinei, zviri unyanzvi chaizvo uye ruzivo, uye ndiani akanyora bhuku " Mästerdirigentens anoshanda " kupa kuverenga kuti Jesu achadzoka 2036th gore
Kana tichigona, pakati pezvimwe zvinhu, achiteerera Radio p1 " Vanhu uye kutenda ". Akamuka yakazara maminitsi 16 zvinowanikwa mupurogiramu kupa chinyorwa chake.
How kukarukureta aenda
Kuti tiwane remakore, iye muBhaibheri afunga kuti Jesu ari kuuya shure kwemakore 5999 pashure pakusika. To nhamba anogona kunokumbira, handina kuramba asi anofanira uchatamisa nhamba karenda yaGregory kurera muna 2036, uye pano ndinoreva kuti zvinogona kuva zvakaipa.
Karenda yaGregory kuti tinoshandisa havasi yakavimbika nguva dzose. Zvinozivikanwa kuti yava miscalculated pamusoro akawanda apo Jesu akaberekwa. Asi zvaisazova ndakashamisika kuti Jesu chaizvoizvo anouya shure kumativi 2036th
Asi kana chaizvoizvo Jesu achiuya shure muna 2036 saka ane mubhaibheri kubvutwa kutora nzvimbo muna 2029. The kubvutwa yeBhaibheri inoitika mumakore manomwe asati Jesu anodzoka. Jesu vasingakwanisi kudzoka kusvikira pakubvutwa kwakaitika. Muna 2029, tinoziva ipapo pamusoro Anders Gärdeborn zvakanaka.
Asi ndinofanira kutara chimwe chinhu: Anders Gärdeborn haana uchabvuta muna Masvomhu ake achiratidza kuti hurege kuva chokwadi chose. Gärdeborn havana chaiwo maonero pakubvutwa kuti tinoona muBhaibheri. Kana ukachenjerera saka kuverenga Nguva inotaurwa muBhaibheri uye nguva, unofanira kuva nechokwadi kuti vauye zvose izvi zvimwe zvinhu kuti Bhaibheri rinodzidzisa, uye asingadi kusiya chinhu.
Zvinofanira Zvechokwadi vachabvumidzwa Anders Gärdeborn vanodavira kuti kutambudzika kukuru kunotanga muna 2029, makore manomwe asati Jesu anodzoka. Pano ari kodzero kutambudzika kukuru vanofanira kugara Jesu asati anogona kudzoka makore manomwe.
Saved uye makagadzirira
Asi kune kutambudzika kukuru achakwanisa ukadarika, panofanira kuva zvinhu zviviri. Chokutanga iwe une kubvutwa akaponesa vatendi kuti kutora nzvimbo uye vane kwaAntikristu kuuya mberi. Munhu Anopesana naKristu anogona kuonekwa bedzi pashure kubvutwa Jesu vatendi zvaitika.
Chero bedzi pakubvutwa asina kutora nzvimbo, kwaAntikristu hazviuyi mberi. Munhu Anopesana naKristu anogona kuuya mberi nhasi nekuti pakubvutwa hazvisati zvaitika. Asi uyai akakwanisa kubuda muna 2029? Kana kubvutwa zviitike pamberi?
Zvakanyanyokosha kuti isu nechekare vagamuchira Jesu kuitira kuti takaponeswa uye vakagadzirira.